hard သိပ္ပံ: သင်၏စိုက်ထူအားကောင်းစေရန်မည်ကဲ့သို့။ Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် - နစ်ခ်နိုက်, MD (2018) က
GQ Doc ချစ်ခင်ရပါသော, သငျသညျပျြောရှငျနှင့်ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသော, ငါ၏စိုက်ထူ Fitter လုပ်ပုံကိုပြောပြနိုင်မလား? အီးမေးလ်ဖြင့် Anon,
သင်ကစိုက်ထူမှကြွလာသောအခါနည်းနည်းနှစ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲသွားပြီကြောင့်သင်ယူဖို့ unsurprised ဖြစ်နိုင်သည်။ အဲဒီဆိတ်ကွယ်ရာသစ်ကိုစီးပွားဖြစ်အနေဖြင့်, သင်တန်းဖြစ်ပါသည် Viagra ၏ရရှိနိုင်မှု သင်၏ဖော်ရွေသောဒေသခံဆေးဆိုင်မှ (ခြေချောင်းအနည်းငယ်ကောက်ပြီးသော်လည်းလိုအပ်သောမေးခွန်းများပြီးနောက်) ။ ဒါကြောင့်ထိုင်ပြီးထိုင်ကြည့်ပါ၊ မျက်လုံးများကိုစစ်ဆေးရန်သင်၏ပခုံးကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးသင်၏စိုက်ထူမှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်သင်လုပ်နိုင်သမျှအားလုံးအပေါ်မှတ်ဉာဏ်ကိုပြန်လည်ဆန်းသစ်စေပါလိမ့်မယ်။
သဘာဝကျကျ, စိုက်ထူစကားပြောဆိုမှုစာကျွေးခြင်း၏ဘုံအရင်းအမြစ်မရှိကြပေ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ cerebrum percolating အတူတူမေးခွန်းများကိုရှိသည်မဟုတ်အားလုံးမဆိုလိုပါဘူး။ ဤတွင်ပျေါလှငျဖြစ်ကြသည်။
အဆုံးထုတ်ကုန်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်စဉ်အခါ, ခရီးသုံးခုအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများယူပါ။ အသုံးအများဆုံးစိုက်ထူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သင့်ရဲ့ reflexogenic စိုက်ထူဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင် arousal သို့မဟုတ်စိတ်ကူးစိတ်သန်း (သို့သော်အဘယ်သူမျှမဆက်သွယ်ရ) ကစေသော, သင့် psychogenic စိုက်ထူဖြစ်ပါတယ်။ တတိယနှင့်နောက်ဆုံးသင်၌ရှိကြ၏သည့်အခါလာကြောင်းကိုသင်၏ nocturnal စိုက်ထူဖြစ်ပါသည် အိပ်စက်ခြင်း၏နက်ရှိုင်းသော REM အဆင့်က - နှင့်သောတကယ်တော့အနည်းငယ်သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွအတူပြုလိုက်ပါတယ်။
ထို“ နံနက်ခင်းဘုန်းအသရေ” သည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်ညသုံးနာရီမှငါးမိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ပြီးညပိုင်းတွင်မိနစ် ၃၀ အထိကြာနိုင်ဖွယ်ရှိသောည၏နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာ penile ခုခံသင်တန်းအဖြစ်စဉ်းစားပါ။
မသာပါကရက်စွဲတစ်ခုပေါ်တွင်အသုံးပြုခံရဖို့တစ်လိုင်းဘယ်တော့မှဖြစ်ပါသည်, ဖိနပ်အရွယ်အစားသည်သင်၏လိင်တံ၏အရွယ်အစားမှဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းလုံးဝသက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်။ ဤမေးခွန်းကိုသို့ (တစ်နည်းနည်းနဲ့) လမ်းအပေါင်းတို့ဖန်ဆင်း Urology International ၏ဗြိတိန်ဂျာနယ်.
တကယ်တော့လေး: အရပ်ပုသည့် penises ပိုပြီးကြာကြာသူတွေကိုထက်အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်
လေ့လာရေး (ငါလိုခငျြချင်ပါတယ်သုတေသနအလုပ်မမျိုး) စိုက်ထူတဲ့အခါကြာကြာလိင်တံမအဖြစ်ပိုမိုတိုတောင်းလိင်တံနီးပါးနှစ်ကြိမ်လောက်အဖြစ်တိုးပွါးကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်အနည်းငယ်တိုတောင်းဆွဲထားကြသည်ခံစားမိလျှင်ကိုယ့်ကိုမှတ်မိ: သင်၏လိင်တံကနေ Elastigirl ဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ Incredible။ ငါတို့သည်ကြောင်းရုပ်ရှင်ကိုချစ်။
“ Am I Normal” လေ့လာမှုသည်ယူကေတွင်ယောက်ျား ၁၅၀၀၀ ကျော်ကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှလိင်တံစိုက်ထူမှုသည် ၅.၁၆ လက်မ (15,000cm) ဖြစ်ပြီးပျမ်းမျှ flaccid လိင်တံသည် ၃.၆၁ လက်မ (5.16cm) ဖြစ်သည်။ သုတေသနစာတမ်း၏ "လေ့လာမှုကန့်သတ်ချက်များ" အပိုင်းကမူ“ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွင်စိုက်ထူထားသည့်တိုင်းတာမှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပြီးလေ့လာမှုများအကြားအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုကို flaccid stretched length တွင်တွေ့ရသည်” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ လေ့လာရန်အတွက်ဘယ်လောက်ခဲယဉ်းပါသလဲ။
ထိုအားလုံးမှန်သည်။ သင့်ရဲ့လိင်တံသဘာဝကျကျရသောအခါစိုက်ထူအထဲတွင်အနည်းငယ်ကွေးရှိနိုင်ပါသည်။ ဿုံပုံမှန်။ သို့သော်ကွေးနာကျင်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည်လျှင်, ထိုသို့သော Peyronie ရောဂါအဖြစ်နောက်ခံအခြေအနေ, လိင်တံအတွက်အမာရွတ်တစ်သျှူးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာအခြေအနေကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သည်မည်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင့်မိသားစုဆရာဝန်ကိုကြည့်ပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုမေးခွန်းများကိုရှင်းလင်းပြီးပြီ ဖြစ်၍ အိုလံပစ်ဆောင်ပုဒ်နှင့်ကိုက်ညီရန်သင်၏စိုက်ထူမှုကိုရရှိရန်သင်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ကြစို့။Citius, Altius, Fortius"(" မြန်မြန်, အဆင့်မြင့်, ခိုင်ခံ့သော ") ။ သင်အမှန်တကယ်စိုက်ထူခြင်းကိုမည်သို့ရရှိကြောင်းသိပ္ပံနည်းကျသိပ္ပံနည်းနည်းဖြင့်စတင်ကြပါစို့။
စိုက်ထူခြင်းဆိုသည်မှာသင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မလွယ်ကူပါ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်အာရုံကြော၊ သွေးကြောနှင့်ဟော်မုန်းစနစ်များမှများစွာသွင်းအားစုလိုအပ်သည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းပြင်းထန်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာတွန်းအားတစ်ခုနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ flaccid မှကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောလိင်တံကိုသော့ချက်အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲနိုင်သည်။
ဒီအောင်မြင်ရန်တစ်သွယ်ဝိုက်နှင့်တိုက်ရိုက်လမ်းနှစ်မျိုးလုံးရှိတယ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုစိုက်ထူသင်၏ကျောရိုး၏အနိမ့်စိတျအပိုငျးနှငျ့သငျ့ရံဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်အတွင်းအာရုံကြောဖြစ်ပေါ်ဖို့သင့်လိင်တံကိုထိသဖြင့်အောင်မြင်တိုက်ရိုက်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ psychogenic စိုက်ထူ (ဥပမာအမြင်အာရုံ,) Non-စက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနေတဆင့်, အသွယ်ဝိုက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့် လိင်စိတ်နိုးထ။ ၎င်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်တွင်းရှိ limbic system ကိုသက်ဝင်စေပြီးသင်၏ကျောရိုးအောက်ပိုင်းဒေသများမှတဆင့်သင်၏ erectile အာရုံကြောစင်တာများသို့လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုကိုပေးပို့သည်။ အဆုံးတွင်သင်သည် ncturnal penile tumescence ဟုခေါ်။ မဟုတ်ဘဲ erotically မဟုတ်သော nocturnal (သို့)“ နံနက်ဘုန်းအသရေ” စိုက်ထူခြင်းကိုနှစ်မျိုးလုံးရနိုင်သည်။ ဘယ်လိုရင်ခုန်စရာ
ဇာတ်စင်နှစ်ခု: အဆိုပါ engorgement
မသက်ဆိုင်ဘဲမူလဇာတ်စင်တဦးတည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်မည်သို့, လာမယ့်အစိတ်အပိုင်းကိုအားလုံးသင့်ရဲ့ပိုက်အကြောင်းပါ။ သင့်ရဲ့ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုတစ်အစွမ်းထက်သွေးကြော dilator, နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏ Courtesy သင့်ရဲ့လိင်တံအတွက် trabecular သွေးလွှတ်ကြောများနှင့်ချောမွေ့ကြွက်သားသို့ဖြန့်ချိသည်။ ဒါကသွေးလွှတ်ကြောနှင့်သင်၏လိင်တံ၏အဓိက bulkhead, အ corpora cavernosa အသွေးနှင့် engorged ဖြစ်လာဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Helpfully, ထိထိရောကျရောအသွေးတော်ထွက်ဖျန်မှသင်၏လိင်တံ၏သွေးပြန်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်း, သင်၏လိင်တံကျပ်၏ ischiocavernosus နှင့် bulbospongiosus ကြွက်သားအရပျ၌ဤအသှေးကိုစောင့်ရှောက်နှင့်သင့်စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့။
ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွဖယ်ရှားနေသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, သင့်အရံအာရုံကြောစနစ်လုပ်ဆောင်မှု dampens ။ ဇာတ်စင်နှစ်ခု၏ဖြစ်စဉ်များထို့နောက် reverse နှင့်သင့်လိင်တံက၎င်း၏ပုံမှန်, ကျိန်းဝပ်ပြည်နယ်မှပြန်လည်ရောက်ရှိ။
မည်သည့်သိသာထင်ရှားသောကျောရိုးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဟော်မုန်းရောဂါတစ်ခုမရှိခြင်းယူဆရင်, အလားအလာအတားအဆီးတကယ်တော့ဇာတ်စင်တဦးတည်းနှစ်ဦးမှာမတူညီတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဇာတ်စင်တဦးတည်းမှာစိတ်ကြွဆေးဖြစ်လာဖို့သင့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်အတွက်ချို့ယွင်းဖြစ်စေသောဘာမှသင့်ရဲ့ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏တစ်ဦးကို Activation ထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဇာတ်စင်နှစ်ခုမှာသွေးကြောတစ်ကျဉ်းစေတယ်တစုံတခုကိုမျှသင်၏အစိုက်ထူ၏ engorgement ထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။
Method ကိုတဦးတည်း: ဆေးလိပ်သောက် Stop
Method ကိုနှစ်ခု: မှန်မှန်လေ့ကျင့်ပါ
အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းကသင်၏သွေးကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီခြင်းနှင့်သွေးကြောများ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ အချို့သော Kegel တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုထည့်ပေါင်းမှာသွန်းသောအသွေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်သော penile ကြွက်သားအားကောင်းစေ။
Method ကိုသုံး: သင်၏အရက်သောက်ဒေသကိုသုံးသပ်
ရှောင်ကြဉ်ခြင်း အလွန်အကျွံအရက်သောက်သုံး သင့်ရဲ့ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်နှင့်သင့်လိင်တံနှစ်ဦးစလုံးထိခိုက်ရှိနေဆဲသေချာစေမည်။ ဒါကြောင့်သဘာဝအပန်းဖြေမယ့်အဖြစ်အရက်၏တစ်ဦးကပျော့ငွေပမာဏပင်သင့်ရဲ့ဂိမ်းတက် Pep ပါလိမ့်မယ်။
Method ကိုလေး: ကျန်းမာခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုထိန်းသိမ်းပါ
ဤသူသည်သင်တို့အီစထိုဂျင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခံရပိုပြီး testosterone ဟော်မုန်းမှုအရာပိုလျှံခန္ဓာကိုယ်အဆီ, မလိုပါကြောင်းသေချာ။ ဒီအမြင့်မားတဲ့အီစရိုဂျင်နှင့်အောက်ပိုင်း testosterone ဟော်မုန်းဟန်ချက်သင့်ရဲ့စိုက်ထူခြိမ်းခြောက်အရာဖြစ်တယ်။
Method ကိုငါးခု: သင်၏အစားအသောက်များတွင်မှောင်မိုက်သီး Add
ထိုကဲ့သို့သော blueberries အဖြစ် Berries ပါ (နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်) အခမဲ့အစွန်းရောက်များ၏အဆင့်ဆင့်လျော့ကျစေပါတယ်နှင့်ကောင်းမွန်သော penile သွေးစီးဆင်းမှုဘို့ခွင့်ပြုထားသည့်ဓါတ်တိုး anthocyanin, ဆံ့။
Method ကိုခြောက်လ: နောက်ခံကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းထိန်းချုပ်မှု
ထိုကဲ့သို့သောဆီးချို, သွေးတိုးသို့မဟုတ်ထမြောက်တော်မူလက်စထရောလ်အဖြစ်သင့်သွေးကြော, ထိခိုက်စေသောမည်သည့်အခြေအနေကောင်းသောထိန်းချုပ်မှုကိုရရှိရန်အတွက်, ရေရှည်သွေးကြောပျက်စီးမှုကိုအသေးအဖွဲအားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့စိုက်ထူဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Method ကိုခုနစျယော: ရက်အနည်းငယ်ရှောင်ကြလော့
ရက်အနည်းငယ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်လိင်မှပယ်ကိုင်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်တို့သည်ဆင်းရဲသောသူကိုအခန်းမျိုးစုံကြိမ်တစ်နေ့လျှင်အလံတင်သည့်ခဲ့ကြပါလျှင်ထက်ပိုကြီးတဲ့, ပို engorged လိင်တံအောင်မြင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ အဆင်မပြေ, သင်တန်း, သငျသညျသိမတိုင်မီအမှုအရာကျော်ဖြစ်မည်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးလေး key ကို tools တွေကိုယခုအချိန်တွင်ကြွလာသောအခါအကောင်းဆုံးလိင်နှိုးဆွခံစားရန်မအတားအဆီးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသေချာစေရန်ရိုးရှင်းစွာရှိပါသည်။
Method ကိုတဦးတည်း: သင်၏စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ဆင့်စီမံခန့်ခွဲရန်
သင်တို့သည်ဤ tools များ သုံး. သင့်စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ဆင့်စီမံခန့်ခွဲသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဒါကစိုက်ထူခြင်းမရှိအာရုံပြံ့လှငျ့ရှိပါတယ်အစပျိုးလိုက်ခြင်းအရာသည်သင်၏ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်သေချာ။
Method ကိုနှစ်ခု: မည်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိစ္စများနေရပ်လိပ်စာ
Method ကိုသုံး: စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတှကျကောငျးကုသမှုကိုသေချာ
ဤအခြေအနေများစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ် Self-image ကိုစိုးရိမ်။ သင်၏ဆရာဝန်ကိုမြင်လျှင်နှင့်ပြောနေတာကုထုံးနှင့်လိုအပ်ပါက, ဆေးဝါးများကနေတဆင့်ချက်ချင်းသူတို့ထဲကထိပ်ပေါ်မှာရတဲ့အားဖြင့်နောက်ကျောရောဂါလက္ခဏာတွေရိုက်တယ်။
Method ကိုလေး: ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကို Taper
ညစ်ညမ်းတဲ့ကျန်းမာငွေပမာဏကိုသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ အလွန်အကျွံ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျများ၏ရှေ့မှောက်၌ကာမဂုဏ်ကိုခဏရန်သင့်အား desensitise နိုငျသညျ, ဒါဖြည့်ညှင်း၌စောင့်ရှောက်လော့။
စိုးရိမ်ထိတ်လန်မထားပါနဲ့။ သာကပိုဆိုးစေမည်။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဘုံဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်နုပျိုသောအရွယ်အုပ်စုများအတွက် (က porn ကြယ်ပွင့်တစ်ဦးကထိပ်တန်းအစွန်အဖျားဖြစ်ပြီးကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မှမရှာ) စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်ပတ်လည် psychogenic ပြဿနာဖြစ်ကပိုဖွယ်ရှိသည်။ 40 နှင့် 70 ၏အသက်အရွယ်အကြားယောက်ျားအတွက်, ကရာခိုင်နှုန်း 50 အချို့ကိုဒီဂရီရှိလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ဒီအသက်အရွယ်အုပ်စု, သွေးစီးဆင်းမှုကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုထက်ပိုရှိပေမည်။ တစ်ခုခုကိုအမှု၌, သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သူတို့အချို့ကိုသင်ကပိုအကြံပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ဦး erectile litmus စမ်းသပ်မှုသငျသညျတညဉျ့-အချိန်သို့မဟုတ်အစောပိုင်းနံနက်စိုက်ထူလာပြီဖြစ်ကြောင်းလျှင်, ဖွယ်ရှိတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွေးကြောပြဿနာတစ်ခုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပါသည်။
ယခုသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာဤသော့ချက်ကိရိယာများတွင်ဖော်ပြထားသောပြissuesနာအချို့ကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ထိုအကြံဥာဏ်သည်မှော်အပြာလုံးသေးငယ်သည့်ပုံစံဖြင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ Sildenafil (Viagra) သည်သင်၏လိင်တံသို့သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်နှင့်ရေရှည်တည်မြဲသောစိုက်ထူမှုရရှိစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သော phosphodiesterase type5inhibitor ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင့်အား“ မြင်းကိုပြန်ရ” ရန် (သို့မဟုတ်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်သောကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိပါက) သင့်အားကျန်းမာသောရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုရရှိရန်ကူညီရန်ရေတိုနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါဟာနည်းနည်းအပြာရောင်ဆေးပြားအပါအဝင်အားလုံးအထက်ပါစမ်းသပ်ပြီးနောက်, သင်ဆဲစိန်ခေါ်မှုများရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားရွေးချယ်မှုအမြဲရှိပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောပြဿနာအဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေသဘာဝအဆင်မပြေမှုအပေါ် preying အားလုံးအနေဖြင့်သူတို့သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်တရားမဝင်သိပ္ပံဆီသို့နောက်ထပ်ဝေးသိပ္ပံကနေသက်သေပြထိရောက်မှုနှင့်တကယ်တော့နှင့်ပိုပြီးရွှေ့ဖို့လေ့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဤအဆင့်မှာမှန်လျှင်ငါ urology အထူးကုကြည့်ဖို့တစ်ဦးလွှဲပြောင်းဆွေးနွေးရန်သင့်ဆရာဝန် သွား. ကြည့်, ပြောပါလိမ့်မယ်။ : ဒါဟာသင်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောလျော့နည်း-သက်သေပြနည်းလမ်းများ, အတူမအောင်မြင်, dabbling နှမြောစေခြင်းငှါ
သင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာ tools များနှင့်လှည့်ကွက်များ၏ပန်ဒိုရာရဲ့သေတ္တာနေသော်လည်းများစွာသောလူများအတွက်အကောင်းဆုံးဆေးကုသမှုကိုအကြံပေးခြင်း, အပန်းဖြေအနားယူ, အပန်းဖြေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ (ထိုပြဿနာတစ်ခုအထောက်စိတ်အေးလက်အေးလိင်တံအခါဟုတ်ပါတယ်, အပြန်အလှန်, ငါသိ၏) ။ သင်လုပျနိုငျလြှငျမူကား, သင်၏သွေး, သွေးကြောနှင့်လိင်တံကြွင်းသောအရာပြုလိမ့်မည်။
ဒေါက်တာနစ်ခ်နိုက်တစ်မိသားစုဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ Twitter ပေါ်တွင်သူ့ကို Follow (@DrNickKnight).